कुनै सतहमा रहेको कोरोनाभाइरस कति समय जीवित रहन्छ ? – " सुलभ खबर "
एजेन्सी । कोरोनाभाइरस कुनै सतहमा कति समय सक्रिय रहन्छ भन्ने कुरामा धेरै मानिसले चासो दिइरहेका छन् ।प्रकोपबाट सबैभन्दा प्रभावित देश चीनमा त त्यहाँको केन्द्रीय बैङ्कले नोटहरु धेरैको हातमा पुग्ने भएकाले ठूलो परिणाममा नोट जलाउने निर्णय गरेको छ । यो संक्रमित भएका नोट कटौती गरेर भाइरसको विस्तार रोक्न उठाइएको कदम हो ।
तर कोरोनाभाइरस संक्रमित सतहमा कति समय सक्रिय रहन्छ भन्ने ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन । केही अनुसन्धानदाताले कोरोनाभाइरसका अन्य प्रजातिको अध्ययनबाट यस सम्बन्धमा केही जानकारी हासिल गरिरहेका छन् ।
कोरोनाभाइरस जनावरमा पाइने भाइरसको ठूलो समूहलाई संयुक्त रुपमा प्रयोग गरिने नाम हो । विरलै अवस्थामा मात्र ती जनावरबाट मानिसमा सर्छन् ।अहिलेको कोरोनाभाइरस प्रकोप कुन जनावरबाट आएको पनि यकिन भइसकेको छैन । विगतका कोरोनभाइरस प्रकोपमध्ये मर्स उँटबाट आएको थियो भने सार्स बिरालोबाट मानिसमा सरेको विश्वास गरिन्छ ।
मानिसलाई संक्रमित गरेका सार्स र मर्सजस्ता भाइरसहरु धातु, सिसा वा प्लाष्टिकको सतहमा बाँच्न सक्छन् । ती भाइरस खुल्ला सतहमा नौ दिनसम्म सक्रिय रहेको देखिएको छ ।तर आम घरेलु सामाग्रीकै प्रयोगले ती भाइरस मरेको देखिएको थियो । अनुसन्धान अनुसार मानिसलाई लाग्ने कोरोनाभाइरस ६२–७१ प्रतिशत इथानोलमार्फत प्रभावकारी रुपमा निस्कृय पार्न सकिन्छ । त्यसबाहेक ०.५ प्रतिशत हाइड्रोजन पेरोक्साइड वा ०.१ प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट वा ब्लिचले केही मिनेटमै भाइरसलाई निस्कृय बनाउँछ ।
‘हाल उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा, नोबल कोरोनाभाइरसबारे बुझ्न सार्स कोरोनाभाइरस बढी भरपर्दो छ । दुईवटाको ८० प्रतिशत सिक्वेन्स समान छ । जहाँसम्म सार्स लगाउने कोरोनाभाइरसको कुरा छ, त्यो सतहमा पाँच मिनेटेदखि नौ दिनसम्म सक्रिय रहन सक्छ,’ युनिर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका संक्रमित रोगसम्बन्धी चिकित्सक डा. चाल्स चिउले भने ।तथापि, ती खोजलाई नोबल कोरोनाभाइरसको सन्दर्भमा हुबहु लागु गर्न सम्भव छैन,’ चाल्सले बताए ।
नोबल कोरोनाभाइरस र अन्य कोरोनाभाइरसबीच केही समनता भएको भए पनि ती बीचको भिन्नता पनि देखिदैछ । ‘एउटा त कोभीड–१९ सार्स र मर्सजस्ता कोरोनाभाइरसजति प्राणघातक छैन,’ विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस घेब्रेयिससले बताए ।
‘संक्रमितमध्ये ८० प्रतिशत व्यक्तिमा सामान्य विरामीका लक्षण देखिएको छ । १४ प्रतिशत मानिसमा भाइरसले न्युमोनिया र सास फेर्न गाह्रो बनाएको छ । जम्मा पाँच प्रतिशत विरामीमा स्वास प्रश्वास प्रणाली फेल हुनेसम्मको गम्भिर प्रकृतिका रोग देखिएका छन्,’ टेड्रोसले बताए, ‘वृद्धवृद्धामा मर्नेको जोखिम बढी हुन्छ । बालबालिकामा भने यो रोग तुलनात्मक रुपमा कम देखिरहेका छौँ । ’
तर मर्ने दर कम भए पनि यसको विस्तार दर भने निक्कै उच्च देखिन्छ । वैज्ञानिकहरुको लागि पनि यसले चिन्ता उत्पन्न गरिरहेको छ । ‘सूचित रहनुस् तर नडराउनुस्,’ चिउले भने, ‘यदी तपाईंलाई चिन्ता लाग्यो भने तारन्तार हात धुनुस्, विरामी मानिसको नजिक नबस्नुस्, र संक्रमण भएका व्यक्तिसँग सम्पर्क भयो भने क्वारेन्टाइनका सर्तहरु पालना गर्नुस् ।’धेरै मानिस सामान्य रुघाखोकीलाई कोरोनाभाइरस भनेर झुक्किने गर्छन् । त्यसका लागि जिम्मेबार इन्फ्लिुन्जा भाइरस खुल्ला सतहमा ४८ घण्टासम्म सक्रिय रहनेगर्छ ।